Chris Evans – Stars – Channel Myanmar
Avengers: Endgame (2019) MCU Avengers: Endgame(2019) IMDb...8.8,,,,,,Rotten.....95% ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သိပ်ပြောစရာမလိုလှပါဘူး။ အားလုံးလည်း သိနေကြမှာပါ။ Mad Titan ဖြစ်တဲ့ Thanos ဟာ စကြဝဠာကြီး အဓွန့်ရှည်ဖို့ အနန္တကျောက်တုံးတွေကိုသုံးပြီး သက်ရှိ တစ်ဝက်တိတိ ဖျောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်ကို အဗန်ဂျာတွေ ဘယ်လို ပြန်ကယ်တင်မလဲ ဘယ်လို လက်စားချေမလဲဆိုတာ ဒီကားမှာ တွေ့ရပါတော့မယ်။ အားလုံးအကြိုက်တွေ့ကြမှာ သေချာပါတယ်။ အက်မင်တွေတော့ ရုံမှာ ၃ ခေါက်လောက်ကြည့်ပြီး ဒီဗားရှင်းကို ငါးခေါက်လောက်ကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်လောက်အောင် ကြိုက်ပါတယ်။ ခံစားကြည့်ကြပါ။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Little Neo ပဲဖြစ်ပါတယ်...... MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ Download နိုင်ပါသည်။ ++++++++++++++++++++++++++++ Marvel Cinematic Universe Intro ======================= Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။ Marvel Universe မှာ Infinity ...
IMDB: 8.8/10 360,133 votes
Avengers: Infinity War (2018) MCU 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ဖြင့် Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုပေါင်းတင်ဆက်ပါသည်။ MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ Download နိုင်ပါသည်။ ++++++++++++++++++++++++++++ Marvel Cinematic Universe Intro ======================= Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။ Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan ...
Avengers: Age of Ultron (2015) MCU When Tony Stark tries to jumpstartadormant peacekeeping program, things go awry and Earth’s Mightiest Heroes are put to the ultimate test as the fate of the planet hangs in the balance. As the villainous Ultron emerges, it is up to The Avengers to stop him from enacting his terrible plans, and soon uneasy alliances and unexpected action pave ...
The Avengers (2012) MCU When an unexpected enemy emerges and threatens global safety and security, Nick Fury, director of the international peacekeeping agency known as S.H.I.E.L.D., finds himself in need ofateam to pull the world back from the brink of disaster. Spanning the globe,adaring recruitment effort begins! 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ဖြင့် Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုပေါင်းတင်ဆက်ပါသည်။ MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ ...
Spider-Man: Homecoming (2017) MCU 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ဖြင့် Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုပေါင်းတင်ဆက်ပါသည်။ MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ Download နိုင်ပါသည်။ ++++++++++++++++++++++++++++ Marvel Cinematic Universe Intro ======================= Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။ Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan ...
Captain America: Civil War (2016) MCU Following the events of Age of Ultron, the collective governments of the world pass an act designed to regulate all superhuman activity. This polarizes opinion amongst the Avengers, causing two factions to side with Iron Man or Captain America, which causes an epic battle between former allies. 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ဖြင့် Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုပေါင်းတင်ဆက်ပါသည်။ MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ ...
Before We Go (2014) Before We Go ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို ကျနော်တို့ အသဲစွဲ ကတ်ပတိန် အမေရိက (Chris Evans) ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားပြီး သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်... သူကိုယ်တိုင်ရိုက်လို့ ဟာ.. ဖြစ်ပါ့မလားဘယ်လိုကြီးလဲ လို့ စိတ်ထဲက တွေးမိလိုက်တယ် ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်မကြည့်ခင် ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IMDb ၀င်မွှေကြည့်တော့ Rate က 6.9 ရှိနေတော့ အံ့သြောစရာ :) ရုပ်ရှင်ကားတွင် ပါဝင်တဲ့ မင်းသမီးဖြစ်သူ Alice Eve ကလဲ ခေသူ မဟုတ် Night at the Museum: Secret of the Tomb တို့ She's Out of My League တို့လို ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသမီး.... ဇတ်လမ်း အစ မှာ Nick က ဘူတာရုံထဲမှာ ထရန်းပတ် မှုတ်ရင်း ပိုက်ဆံရှာနေစဉ် ...
Puncture (2011) ဒီဇတ်လမ်းဟာ ရှေ့နေတွေအတွက် အကြီးမားဆုံး သမိုင်းတစ်ခု လဲ ဖြစ်ပါတယ် တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် အပေါ် အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ ဒီဇတ်လမ်းမှာ ကိုယ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ကပ္ပတိန်အမေရိက အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Chris Evans ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ဘာကိုမှ သံရောဇဉ် စွဲစွဲမြဲမြဲ မထားတက်တဲ့ အတော်ဆုံးရှေ့နေ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မိုက်ဝှိုက်စ် နဲ့ ဇတ်လမ်းစထားပါတယ် သူလိုက်တဲ့ အမှုတွေဟာ မနိုင်သလောက် မရှိအောင် ရှားပါးပါတယ် မိုက် ဟာ အရမ်းတော်တဲ့ ရှေ့နေ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ အမှောင်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ ဆေးစွဲနေတဲ့ သူ တစ်ဦးပါ မူးယစ်ဆေးကို ခုံမင်နေတဲ့သူပေါ့... တစ်ရက်မှာတော့ မိုက် တို့ ဆီကို အမှု တစ်ခု ရောက်လာတယ် ဆေးရုံက သူနာပြု ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဟာ Aids ဝေဒနာရှင် တဦးကို ထိုးထားတဲ့ ဆေးထိုးအပ် စူးသွားရာကနေ ရောဂါ ကူးစပ်သွားတဲ့ ကိစ္စပါ ဆေးရုံဘက်ကို တရားစွဲ ဖို့ မိုက်တို့က သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့ သူမ ကတော့ သူမ တစ်ဦးထဲ အတွက် ဆိုတာထက် အခြား သူနာပြု နဲ့ ဆရာဝန်တွေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဘေးကင်းဖို့ အတွက် ထပ်မံ ...
IMDB: 6.9/10 21,205 votes
The Nanny Diaries (2007) The Nanny Diaries (2007) မိမိကိုယ်ကို ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ တိတိကျကျ သိကြပါသလား။ The Nanny Diaries ထဲက ဘွဲ့ရပြီးခါစ အသက် ၂၁ အရွယ်ကောင်မလေးကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို အဖြေရှာရင်း နာနီလို့ခေါ်တဲ့ ကလေးထိန်းဘဝကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို The Nanny Diaries ဆိုတဲ့ ဟာသ-ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ဟာသလေးနှောပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အန်နီဘရတ်ဒေါ့ခ်ဟာ ဘွဲ့ရပြီးချိန်မှာ အလုပ်ရှာဖွေရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ အထက်တန်းလွှာမိသားစု တစ်ခုရဲ့ ကလေးထိန်းဘဝကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အန်နီဟာ အားကျစရာကောင်းလောက်အောင် ပြီးပြည့်စုံနေပြီလို့ ထင်ရတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးမှာလည်း လူမသိတဲ့ ဒုက္ခတွေ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိမြင်လာခဲ့ရပါတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာ သလောက် မိဘတွေရဲ့ ဂရုစိုက်ခြင်းကိုမခံရဘဲ၊ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ မိဘတွေကြားမှာ မြေစာပင် ဖြစ်နေရတဲ့ ဂရေယာလေးကို သံယောဇဉ် ...
Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007) Fantastic4ဟာ MCU မှာ မပါသေးတဲ့ Marvel ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး အဖွဲ့တစ်ခုပါ။ Leader Mr fantastic ဟာဆိုရင်လည်း 21 ရာစုရဲ့ အတော်ဆုံး လူတွေထဲက တစ်ယောက်ပါပဲ။ Reed နဲ့ Sunsan တို့ရဲ့ သား Frenklin Richard ကလည်း Mravel မှာ အစွမ်းဆုံး Omega Level Hero ပါပဲ။ ဒါဆို F4 ဆိုတာ Marvel မှာ မသေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့.. Reed နဲ့ Susan တို့ရဲ့ လက်ထက်ပွဲ ကျင်းပတော့မဲ့ အချိန်နဲ့ မရှေးမနှောင်းကာလ.. ဂြိုလ်တွေကို စားသုံးတဲ့ Galactus ရဲ့ ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ Silver Surfer ဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ F4 အဖွဲ့အနေနဲ့ Silver Surferရဲ့ Power ...
Fantastic Four (2005) ဒီဇာတ်ကားက ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မူရင်း Fantastic Four ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး IMDb Rating (5.7/10) ရရှိထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Captain America မင်းသား Chris Evans ၊ မင်းသမီး ဂျက်စီကာအယ်လ်ဘာ တို့နဲ့အတူ Ioan Gruffudd ၊ Michael Chiklis တို့က F4 စွမ်းအားရှင်တွေအဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။ Julian McMahon ကတော့ ဗစ်တာဗွန်ဒူးအဖြစ် အားပြိုင်ထားပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲထွက်ထားတဲ့ Fantastic Four(2015) နဲ့မတူကွဲပြားစွာခံစားရမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဂျက်စီကာအယ်လ်ဘာ ပရိတ်သတ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ မူရင်း Fantastic Four ဖြစ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကားကိုပိုနှစ်သက်မိပါတယ်။ ခံစားအားပေးကြပါဦး။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ ကသာသားလေး နဲ့ Wai Phyo တို့မှပူးပေါင်းဖန်တီးထားတာပါ။) Fantastic Four ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/?s=fantastic+four မှာကြည့်ပါ။ File size…(900 MB) and (400 MB) Quality…Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration….01:47:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
Captain America: The First Avenger (2011) ကပ္ပတိန် အမေရိက ဆိုရင်တော့ အထူးညွန်းနေစရာမလိုပဲ အားလုံးသိကျပါတယ်။ မာဗယ်လ် ရဲ့ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးဟီးရိုးတစ်ယောက်ပါပဲ။ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေး ကို ပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် စတိဗ်ရော်ဂျာဟာ နိုင်ငံ အတွက် စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက် ပေးချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် အချိုးအစား ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တို့ကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် အပယ်ခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ သိပ္ပံပညာ ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်စမ်းသပ်မှု့ကြောင့် သူ့ဘ၀ အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲ သွားပါတော့တယ်။သာမန် လူသားတစ်ယောက်နေ စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ဟစ်တလာ ရဲ့ တပည့်တွေက ဟိုက်ဒရာလို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပြီး ထူးဆန်း သဘာဝလွန်လက်နက်တွေ စမ်းသပ် အသုံးချနေပါတယ် .... စတိဗ် တစ်ယောက် ဒီအဖွဲ့တွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် မလဲ ... ဟိုက် ဒရာ ရဲ့ အထူးလက်နက် က ဘာတွေလဲ နောက်ထွက်တဲ့ Avengers ကားတွေ နဲ့ ဘယ်လိုတွေ ဆက်စပ်နေလဲဆိုတာတွေ ကို ...
IMDB: 6.9/10 548,794 votes
Not Another Teen Movie (2001) ကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ChrisEvansပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အမေရိကန်ကျောင်းသားဟာသကားအမြူးလေးပါ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီးBoxOffice 66.5သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ American Pieကားတွေလိုမျိုးကျောင်းသားလူငယ်ဟာသကားဆိုတဲ့အတိုင်း၁၈++လေးတွေပါဝင်တယ်။ ရယ်လည်းရယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဂျွန်ဟူးဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းလေးမှာအခြေတည်ထားတာပါ။ ကျောင်းမှာနာမည်ကြီးCheerleaderဖြစ်တဲ့ပရစ်ဆယ်လာနဲ့တွဲနေတဲ့ကျောင်းနာမည်ကြီးဘောလုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဂျိတ်ခ်ဝိုင်လာ(ChrisEvans)တယောက်ရုတ်တရတ်အခြားအူကြောင်ကြောင်ကျောင်းသားတယောက်ကြောင့်ရည်းစားဖြတ်တာခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ဂျိတ်ခ်ရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်သူကကျောင်းမှာရိုးအအလူရာသိပ်မသွင်းတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကိုQueenဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လောင်းကြေးထပ်ပါတယ်။ အဲဒီကစပြီးဂျိတ်တယောက်ဂျေနီဘရစ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့နီးစပ်ဖို့အမျိုးမျိုးကြံပါတော့တယ်။ သို့ပေမယ့်ကြားထဲမှာသူ့ကိုဇွတ်ကြိုက်ချင်နေတဲ့အစ်မဖြစ်သူကတ်သရင်းရော၊ဂျေနီရဲ့လူမသိသူမသိအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရစ်ကီလစ်မန်းရော၊ သူ့ရဲ့အတိတ်ကဘောလုံးပွဲအတိတ်ဆိုးတွေကပါအနှောင့်အယှက်ပေးနေခဲ့တာကြုံနေရပါတယ်။ အစ်မဖြစ်သူကတ်သရင်းကတော့သူ့မောင်ကိုတဖြေးဖြေးကူညီပေးရင်းဂျေနီကိုပုံစံလုံးဝပြောင်းပေးပြီးအလန်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲဂျေနီရဲ့မောင်လေးမစ်ခ်ျနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ပေါက်ကရလုပ်တာတွေဟာသတွေအမေရိကန်ကျောင်းသား ဟာသကားတွေရဲ့ထုံးစံတွေလိုပေါက်ကရတွေလုပ်တာတွေ[(၁၈+)တွေလည်းပါတာပေါ့နော်] လူငယ်ဆန်ဆန်ပုံစံတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ကြည့်ရတာတန်စေမှာဖြစ်ပြီညအေးဆေးအချိန်ထိုင်ခွီလိုက်ရအောင်ဗျာ။ဇာတ်ကားကတော့စစချင်းကိုခွီရမှာငိငိ။ ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဇာတ်လိုက်ကြီးChirsEvanဘယ်လိုအခွီတွေနဲ့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ကားကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ (အဆုံးသတ်မှာပါသေးတယ်နော်)။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ Fridays ပဲဖြစ်ပါတယ်) File Size : 750 MB/300MB Quality : Bluray 720P Running Time : 1hr 29minutes Format : Mp4 Genre : Comedy,Adult Translator : Fridays Encoder :Thanhtike Zaw Download From Yoteshin link Download Here Bluray 72op (750 MB) CM Link Download Here Bluray 720p (750 MB) Openload Link Download Small File Size 360p (300 MB) CM Link Download Small File Size 360p (300 MB) Openload Link
Playing It Cool (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး တစ်ခါမှ သိကျွမ်းခြင်းမရှိတဲ့ သူစိမ်း၂ယောက် ရဲ့ အမှတ်မထင် တွေ့ဆုံမှုမှာ ဖူးစာရေစက်ဆိုတာ ဘယ်လိုအရာမျိုးလဲ ဆိုတာကို အချစ်ရိုမန့် ကားလေးကို ဟာသဆန်ဆန်လေး ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ဇာတ်ကားလေးပါ File size…677MB Quality…BR-Rip 720p Format…mp4 Duration….01:34:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Kaung Myat Thu Download and watch via pCloud
IMDB: 6.0/10 16,173 votes
Playing It Cool (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး